Gudoomiyaasha Mareykanka waxay soo dhaweynayaan dib u furitaanka xadka ee booqdayaasha la tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Gudoomiyaasha Mareykanka waxay soo dhaweynayaan dib u furitaanka xadka ee booqdayaasha la tallaalay
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Mexico • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Gudoomiyaasha Mareykanka waxay soo dhaweynayaan dib u furitaanka xadka ee booqdayaasha la tallaalay.
Ururka Gudoomiyaasha Qaranka wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo Maamulka si loo hubiyo nabadgelyada iyo caafimaadka muwaadiniinta joogtada ah iyadoo la kordhinayo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee la socda safarka iyo ganacsiga.
Waaxda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in la furayo xuduudaha Mareykanka ee shaqsiyaadka la tallaalay bisha soo socota.
Dhowr guddoomiye gobol oo Mareykan ah ayaa walaac u muujiyay Maamulka saamaynta joogtada ah ee xannibaadaha socdaalka ee xuduudda ay ku leeyihiin dadka soo doortay.
Ku dhawaaqista Talaadada waa war soo dhaweyn ah iyo tallaabo muhiim ah oo lagu yareynayo saameynta dhaqaale ee bulshooyinka sababtuna tahay COVID-19.
Maanta, Ururka Gudoomiyaasha Qaranka (NGA) ayaa soo dhoweeyay ku dhawaaqista ka timid Waaxda Amniga Gudaha (DHS) ee ku saabsan furitaanka xuduudaha Maraykanka loogu talagalay shakhsiyaadka la tallaalay laga bilaabo bisha soo socota.
Xagaagan, dhowr Guddoomiyeyaal ayaa walaac ka muujiyay Maamulka saamaynta sii socota xayiraadaha safarka xuduudaha dadka ay soo doorteen - oo badankoodu ay yihiin milkiileyaal iyo shaqaale yar, ganacsiyada qoyska ayaa aad u doonaya in ay dib u bilaabaan hawlahoodii.
Ku dhawaaqista Talaadada waa war soo dhaweyn ah iyo tallaabo muhiim ah oo lagu yareynayo saameynta dhaqaale ee bulshooyinkeena sababtuna tahay COVID-19. NGA waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso Maamulka si loo hubiyo nabadgelyada iyo caafimaadka muwaadiniinta joogtada ah iyadoo la kordhinayo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee la socda safarka iyo ganacsiga.
Haddii isbeddellada mustaqbalka la damaanad qaado, Guddoomiyayaashu waxay ugu baaqayaan Maamulka inuu la shaqeeyo dawladaha iyo taritoriyada si loo hubiyo in hagidda siyaasaddu ay tixgeliso saamaynta maxalliga ah ee bulshooyinka.
La aasaasay 1908, Ururka Gudoomiyaasha Qaranka (NGA) waa ururka laba geesoodka ah ee 55 -ka guddoomiye qaran. Iyada oo loo marayo NGA, Guddoomiyayaashu waxay wadaagaan dhaqamada ugu wanaagsan, waxay wax ka qabtaan arrimaha danaha qaranka iyo gobolka waxayna wadaagaan xalal hal -abuur leh oo hagaajinaya dowlad -goboleedka oo taageera mabaadi'da federaalka.